Ao amin'ny Loop & Tie, tsy mitsahatra ny mieritreritra fomba ahafahanay mampiasa ny herin'ny teknolojia hanampiana olona maro hifandray. Ny fisintomana tsapantsika hahafantatra sy hifety amin'ny alàlan'ny fanomezana dia fahatsapana tsara tarehy sy maharitra. Amin'ny alàlan'ny fanolorana ny mpampiasa Salesforce ny fahaizana mandefa fanomezana mivantana avy amin'ny fampiharana azy ireo, dia afaka manome hery haingana kokoa ny traikefa amin'ny fanomezana olona ho an'ny orinasa izahay.
Ny sehatra fanomezana Loop & Tie dia mamorona traikefa mpanjifa misy dikany izay mamaritra ny filan'ny orinasa ilaina amin'ny fanitsiana sy ny fanarahana. Ny fananganana ao anatin'ny Salesforce dia manampy ireo orinasa hanolotra fikitihana feno fieritreretana izay vato fehizoro amin'ny fifandraisana matanjaka, ao anatin'ny rafitra azo zahana izany rehetra izany izay manampy ny mpanjifa handrefy ny ROI amin'ny programa fanomezana azy ireo.